Post oge: Apr-21-2021
The Chinese ika INDIAM popcorn e tọrọ ntọala na a mfe premise: ndị mmadụ kwesịrị snacks na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ ma dị mma maka ha. Nsonaazụ bụ nsị kacha mma na-atọ ụtọ nke nwere ntakịrị, ihe kachasị ọcha na nke kachasị mfe niile ngwaahịa anyị popcorn na-amalite site na motto 'snacking without ...GỤKWUO »
Akara njikọ maka INDIAM popcorn na Mercedes-Benz Cars
Akara njikọ maka INDIAM popcorn na Mercedes-Benz Cars INDIAM popcorn jikọtara aka na Mercedes-Benz Cars na-aga nke ọma maka ihe omume a Ọ na-egosi na popen na INDIAM nwere ọgaranya dị ukwuu n'ime. ihe ohuru ... GỤKWUO »
1) Gini na-eme Popcorn Pop? Kernel ọ bụla nke popcorn nwere otu ntapụ mmiri echekwara n'ime gburugburu starch dị nro. (Ọ bụ ya mere popcorn kwesịrị iji nweta 13.5 pasent na 14% mmiri.) Igwe dị nro dị n'akụkụ kernel gbara gburugburu. Dị ka kernel na-ekpo ọkụ, wa ...GỤKWUO »
Ebuputara popu popu ndi China ka ha buru ndi Japan na nke mbu
Na Machị 24th, 2021, emere mmeghe nke mbupute mbupute nke Hebie CiCi Company na Japan na Jinzhou Factory. Ndị isi ọchịchị obodo na ngalaba dị iche iche bịara emume ịpụ. Mbupute popcorn bụkwa nke mbụ nke sph China ...GỤKWUO »
Xing Guohui, onye otu kọmitii na-anọchi anya nke kọmitii otu mpaghara, onye osote onye isi nke ọgbakọ omebe iwu nke ndị mpaghara na odeakwụkwọ nke kọmitii otu ọchịchị shijiazhuang, gara leta ụlọ akwụkwọ INDIAM popcorn nke Hebei Cici Co., Ltd 2021, Machị 1621, Shijiazhuang nwere otu spri ... GỤKWUO »
INDIAM popcorn, Ọka agbara agba, China Prefabricated Klas, Caramel popcorn,